China BLMT / BLMC Mekanisara Shear Bolt Lugs orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Waxun
BLMT / BLMC mekanika fanodinana volo mekanika
Fampiharana mahazatra: fifandraisana LV & MV mpampita ho an'ny famaranana sy ny fifangaroan'ny Cable
Ireo mpampifandray mekanika dia natao hampiasaina amin'ny fampiharana LV sy MV.
Ny Connectors dia misy vatana vita amin'ny vifotsy, vodin-doha ary soroka ho an'ny haben'ny fitarihana kely. Vita amin'ny firaka alimina manokana, ireo bolt-pifandraisana ireo dia bolt-head-shear miaraka amin'ny lohan'ny hexagon.
Ny bolt dia tsaboina amin'ny savoka manosotra. Samy misy ny kinova misy ny bolts fifandraisana azo esorina / tsy azo esorina.
Ny vatana dia vita amin'ny alimina alimina matevina avo lenta. Ny atin'ny faritry ny lohan'ny fitondran-tena dia voahidy. Ny lugs dia mety amin'ny rindranasa ivelany sy anaty ary misy amin'ny haben'ny loaka palmie.
Ireo mpampifandray mekanika ho an'ny Mahitsy sy ny tetezamita dia azo alaina tahaka ny karazana tsy voasakana sy voasakana. Ny mpampitohy dia sakanana amin'ny sisiny.
Ny terminal Torque dia natao manokana hifehezana ny fifandraisana misy eo amin'ny tariby sy ny fitaovana.
Ny mekanisma bolt manety tokana dia manome teboka fijanonana tsy miova sy azo antoka. Raha ampitahaina amin'ny farango crimping nentim-paharazana dia haingana sy haingana izy io ary manome antoka ny fe-potoana fanetezana mialoha sy ny hery famatrarana.
Ny terminal torsion dia vita amin'ny alimina alim-pito vita amin'ny vifotsy ary manana rindrina miendrika alitara anatiny.
Ny mampiavaka azy dia ny ahafahany mamonjy ny asa sy manatsara ny fahombiazan'ny herinaratra sy mekanika.
▪ Fitaovana: firaka alimina vita anaty diamondra
▪ mari-pana miasa: -55 ℃ hatramin'ny155 ℃ -67 ℉ hatramin'ny 311 ℉
▪ fenitra: GB / T 2314 IEC 61238-1
▪ Fampiharana marobe
▪ Famolavolana paikady
▪ Azo ampiasaina amin'ny saika ny karazana conducteur sy ny fitaovana
▪ Ny lohan'ny fanetezana tady maharitra dia manome antoka ny fahombiazan'ny fifandraisana amin'ny herinaratra
▪ Azo apetraka mora foana amin'ny wrench socket mahazatra
▪ Volavola alohan'ny injeniera ho an'ny fametrahana tanteraka amin'ny tariby misy herinaratra maharitra hatramin'ny 42kV
▪ Fahaiza-miasa misy amin'izao fotoana izao ary manohitra ny fotoana fohy
Ny vatan'ny terminal dia vita amin'ny alimo alim-pito vita amin'ny firavaka vita amin'ny firinga. Ny terminal dia mety ho an'ny fampiharana ivelany sy anaty trano, ary afaka manome famaritana habe samihafa.
Mifandraisa amin'ny tselatra
Vita amin'ny alimina alimina manokana, ireo bolt-pifandraisana ireo dia vodin-doha hetagonaly lohan-doha. Ireo bolts ireo dia tsaboina amin'ny lubricant avo lenta ary misy peratra fifandraisana manokana. Raha vantany vao voahitsaka ny lohan'ny bolt dia tsy afaka esorina ireo bolt fifandraisana.
Plug-in manokana, apetraka na esory mba hanitsiana ny isan'ireo mpampita. Ireo inserts ireo dia samy manana ny tadiny lava sy ny toerana misy azy.
Endri-javatra sy tombony amin'ny lugs mekanika sy mpampitohy
Fampiharana malalaka sy fahaiza-manao matanjaka
Ohatra, telo ny famaritana afaka manarona conducteur 25mm2 ka 400mm2,
Ny vatana dia vita amin'ny alimina alimina vita anaty kofehy matevina
Ary azo ampiasaina amin'ny saika ny karazana conducteur sy ny fitaovana.
Ny bolts dia vita amin'ny firaka alimina manokana
Ny toetra mampifandray tsara, dia afaka mahatsapa ny fifandraisana misy eo amin'ny mpitarika varahina sy ny mpitarika aluminium.
Mila toerana kely fametrahana fotsiny, indrindra mety ho an'ny fampiharana lehibe.
Volavola boribory tubular ao anaty vatana hanatsarana ny fahombiazan'ny fifandraisana
Fampisehoana herinaratra tena tsara.
Lavaka afovoany ary ampidiro
Mizarazara ny sosona oxide mitondra.
Voanjo lohan'ny volo tsy tapaka
Ny sombin-plug-in dia manitsy ny haben'ny fifandraisana na ny terminal mety amin'ny karazan-tariby maro hafa.
Ny fampidirana dia manampy ny mpitantana mba ho mifantoka kokoa ary tsy hanimba ny fitarihana azy rehefa mihamafy ny bolt.
Mampiavaka ny terminal mekanika
Amin'ny halavany lava fanampiny, dia azo ampiasaina ho sakana amin'ny hamandoana
Ny famehezana marindrano dia mety
Mety amin'ny fampiharana anatiny sy ivelany
▪ Tsy mila fitaovana manokana hametrahana azy ireo, fa ny wrench socket ihany no ilaina amin'ny fametrahana azy;
▪ Ny karazany tsirairay dia mitovy ny halavany mihena, ao anatin'izany ny fanomezana tsofoka;
▪ Famolavolana lohan-tsiranoka ho an'ny masirasira hierarchika hiantohana ny fifandraisana azo antoka sy mafy orina;
▪ Ny mpampitohy na ny lug cable dia manana torolàlana fametrahana;
▪ Manoro hevitra izahay ny hampiasa fitaovana fanampiana (jereo ny miraikitra) hisorohana ny mpitantana tsy hiondrika.
Modely amin'ny vokatra
Fampitana tariby mm²
Famaritana ny lohany
Ny halavan'ny peeling
Tabilao fifantina Torque terminal (karazana Guizhou)
Ny fitaovana ilainao ：
▪ takelaka hexagon amin'ny haben'ny A / F marina
▪ ranjam-pasika na herinaratra vokarin'ny herinaratra
▪ Ampiasao fatratra ny fitaovana hanohanana ny bolt fanapahana raha sendra mitanondrika ny mpitantana
1. Safidio ny haben'ny terminal araka ny torolàlana momba ny fifantina. Hamarino ary hamarinina fa manana ny haben'ny tariby mitovy amin'ny nanamarika tamin'ny tariby sy ny terminal izy.
esory ny bolt force shearing mandra-pahatonga azy hanana efitrano ampidiro tariby
2. Ny fitarihan'ny mpanara-maso ny fanamiana. ny halavan'ny hoditry ny mpitarika izay tokony hokapaina manondro ilay torolàlana manoro hevitra.
fadio ny manapaka ilay mpitarika.
3. Mampidirina am-pitandremana tsara ny conducteur eo am-pototry ny terminal torque.
4.fehezo ny bolt shear, amboary ny mpampita amin'ny terminal. ny manenjana ny bolt amin'ny 1-2-3
5. Mba hanamafisana ny bolt amin'ny alàlan'ny ratchet wrench na ny valiny misy herinaratra, alao ny tanjaka araka ny 1-2-3, dingana manaitra voalohany, hampiharana ny tavy 15N.m amin'ny 1-2-3.
mampihatra ny tselatra 15N.m amin'ny 1-2-3 amin'ny fanindroany, mampihatra ny tsela mandra-pahatapahana ny lohan'ny bolt amin'ny 1-2-3 amin'ny fanintelony.
Avereno ny fizotry ny fanapahana mandra-pahatongan'ny bolt rehetra, ary tsy maintsy kapaina amin'ny 1-2-3. Hamarino tsara fa manamboatra ny terminal amin'ny fizotran'ny fanapahana.
Hamarino tsara fa manana tsela ampy, ny bateria dia mandeha amin'ny fitaovana avo. zahao ny valin'ny fanapahana ary esory ny menaka fanosotra sisa.
Teo aloha: BSM mpampifandray bolt mekanika
Manaraka: VCXI Bimetallic Shear Bolt Lug
Lugs bimentallic sy mpampifandray
Londra sy tonon-taolana bimetallika
Lasitra tariby mekanika
mpampifandray bolt mekanika
Loza fanodinana volo mekanika
Loza sy tonon-taolana misy tadiny
BSM mpampifandray bolt mekanika
Voahitsakitsaka volo tsy misy dingana